Ikhaya » izithuba » Iindaba Zohambo Lwezemidlalo » Abaququzeleli beOlimpiki baseTokyo: Imidlalo ehlehlisiweyo iya kugcina iindawo kunye neeshedyuli ezifanayo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Iindaba zaseJapan zokuhamba • Iindaba zeShishini lokuhlangana • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba Zohambo Lwezemidlalo • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
Abaququzeleli beOlimpiki baseTokyo: Imidlalo ehlehlisiweyo iya kugcina iindawo kunye neeshedyuli ezifanayo
Imidlalo yeOlimpiki yaseTokyo yowama-2020 Abaququzeleli babhengeze namhlanje ukuba zonke iindawo kunye neshedyuli yokhuphiswano lomsitho omisiweyo azizukutshintsha kwaye iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo izakucwangciswa njengoko bekucwangcisiwe phambi kokuba umsitho ubuyiselwe umva ngenxa yomsitho Covid-19 ubhubhane ngoMatshi.
Imidlalo yeOlimpiki yaseTokyo iza kudlala imidlalo engama-33 kunye nemidlalo engama-339, kwaye zonke iindawo ezingama-42 ezicwangcisiweyo ziya kukhuselwa kwimidlalo yonyaka ozayo, umongameli wekomiti eququzelelayo u-Yoshiro Mori uqinisekisile kwintetho yakhe kwiseshoni ye-International Olympic Committee (IOC) ngolwesiHlanu.
Ilali yeembaleki kunye neZiko eliyiNtloko loPapasho nazo zigcinelwe i-2021.
"IKomidi eliLungelelanisayo laseTokyo 2020 labhengeza kwiseshoni yanamhlanje ye-IOC ukuba zonke iindawo ezenzelwe iMidlalo ngo-2020 zikhuselekile kunyaka olandelayo, kwaye zaqinisekisa ishedyuli yokhuphiswano lwezemidlalo," yatsho i-IOC kwingxelo elandela iseshoni yeenkomfa zevidiyo.
UJohn Coates, intloko yekhomishini yolungelelwaniso ye-IOC, wathi "ngumsebenzi omkhulu" ukufumana indawo.
Umsitho wokuvula ngokusesikweni i-Olimpiki eTokyo ngoku ucwangciselwe uJulayi 23, 2021, ngelixa umsitho wokuvala ulungiselelwe u-Agasti 8, 2021. Imidlalo ye-Olimpiki yaseTokyo inikezela ngeeseti ezingama-339 zeembasa, eziza kukhuphisana kwimidlalo engama-33 ( Iinkalo ezingama-50).
Olu khuphiswano luza kuqala ngebhola ethambileyo ngentsimbi ye-9: 00 nge-21 kaJulayi, kwiintsuku ezimbini phambi komsitho wokuvula, kwibala lezemidlalo iFukushima Azuma. Imidlalo yokuqala yebhola ekhatywayo iya kuqala kwangolo suku lunye.
Umnyhadala wokuqala wembasa - umpu wabasetyhini o-10m umpu womoya-uza kuqala nge-8: 30 kusasa ngoJulayi 24 kunye neziganeko ezili-11 zeembasa, kweminye imidlalo emithandathu (ukutola ngebhayisikile, ukukhwela ibhayisekile, ukubiyela, iJudo, iTaekwondo kunye nokuphakamisa iintsimbi), ibibanjelwe naloo mini.
Imidlalo yasezidolophini, yenye yezona zinto zibalulekileyo zale Midlalo, iya kubanjelwa kwiindawo zeAomi naseAriake phantse lonke ixesha leMidlalo.
Umdyarho weembaleki kunye nohambo lomdyarho luya kuhlala kwidolophu ekumantla eSapporo emva kokuba kususwe impikiswano eTokyo ngenxa yobushushu obulindelweyo behlobo.
Ikomiti eququzelelayo ikwathi amatikiti ebesele ethengiwe asazosebenza kunyaka olandelayo, kwaye ukubuyiselwa kwemali kuya kunikwa xa uceliwe, nangona iinkcukacha kusafuneka zenziwe isigqibo.
Kwangoko kule veki, umongameli we-IOC uThomas Bach uthe i-IOC ihlale "izinikele ngokupheleleyo" ekumiseni iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo ngo-2021 kwaye ithathela ingqalelo "iimeko ezininzi" ukuqinisekisa ukhuseleko lwabo bonke abathathi-nxaxheba.
Nangona kunjalo, uye wagxininisa ukuba ukubamba iMidlalo ngaphandle kwababukeli ayisiyiyo i-IOC efuna.